Madaxweynihii hore ee Puntland oo Maanta lagu Aasay magaalada Bosaaso iyo Dad-weyne Fara badan oo ka qayb-galay Aaskiisa |
Madaxweynihii hore ee Puntland oo Maanta lagu Aasay magaalada Bosaaso iyo Dad-weyne Fara badan oo ka qayb-galay Aaskiisa
Boosaaso (estvlive) 14/02/2017
Maydka Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde ayaa maanta galinkii hore laga soo dajiyay Magalaada Bosaaso ,iyadoo amniga Garoonka diyaaradaha uu ahaa mid si weyn loo adkeeyay.
Inta badan madaxda Maamulka Puntland oo uu ku jira C/wali Maxamed Cali Gaas , xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo qaar kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland ayaa garoonka ku sugna markii la keenayay maydka marxuumka
Maydka waxaa diyaarad-dii sid-day ka soo dajiyay ciidamo ka tirsan Puntland ,waxaana diyaarad-dan ay ka soo kicitintay magaalada Dubai oo ah halka uu ku geeriyooday General Cad-de Muuse oo muddo afar sano ah soo xukumayay Puntland.
“Waxaan halkan u nimid in aan ka qayb-galno aaska walaalkeen oo runti ahaa nin umadda Somaaliyeed oo dhan ka baxay “ ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo warbaahinta hadal kooban siiyay.
“Dhamaanteen waxaan isku raacsanahay in uu ahaa halyeey wax badan u soo qabtay gobolka iyo waliba Soomaliba ,waxaana alle uga baryaynaa in uu naxariistiisa siiyo. “ ayuu mar kale yiri madaxweynaha oo tacsi u dirayay ehelada marxuumka.
Madax ka timid dhanka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka qayb-galay aaska marxuumka ,waxaana mas’uuliyiintan ka mid ahaa ra’iisul-wasaariha waqtigiisu dhamaaday ee Cumar C/rashiid.
Sidoo kale waxaa munaasabad-da aaska joogay Cali Maxamed Geeddi oo horey ra’iisul-wasaare uga soo noqday Somalia iyo wasiiro ka tirsan xukuumad-da Somalia ee waqtigeedu uu dhamaaday, iyadoo marxuumka lagu aasay duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Bosaaso
Gudoomiye ku xigeenka koowaad aqalka sare ee Somaliya ayaa goobta ka sheegay in fariin tacsi ah ay ka sidaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ,kaasi oo dhawaan lagu doortay magaalada Muqdisho.
Ugu danbayn General Cad-de Muuse ayaa lagu xasuusan doonaa in uu ahaa nin hadal cad oo aan ka gaban runta ,waxaana mas’uuliyiintii ka soo qayb-galay aaska oo ay ku jiraan waxgarad iyo Culumaa’udiin ay tacsi u direen ehelada Marxuumka Geeriyooday.